ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းကြသူတိုင်း အစားတွေ အများကြီး မစားမိစေဖို့ – Trend.com.mm
တစ်ရက်တစ်ရက် စားဖို့သောက်ဖို့အကြောင်းကို အနည်းဆုံးအခါ ၂၀၀ လောက်တွေးမိတယ်ဆိုတာ သင် သိပါသလား? ဒါကြောင့် ဒီလို စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ အလွန်အကျွံ ဆွဲတတ်သူတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘယ်လောက်စားလိုက်သလဲ အမှတ်အသား လုပ်ထားပါ
အစားအသောက်ကို လွန်လွန်ကဲကဲ စားသောက်မိစေတဲ့ အချက်က ကိုယ်ဘယ်လောက် စားသောက်လိုက်မိသလဲ ဆိုတာ သေချာ သတိမပြုမိလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ် ဘယ်လောက် စားလိုက်သလဲဆိုတာ သိအောင် အမှတ်အသားလုပ်ထားပါ။ ဘီယာ သောက်ရင်လည်း ဘယ်နှပုလင်း ကုန်သွားပြီလဲ သိအောင် ပုလင်းထောင်ထားပါ။ ဘူဖေးလို အဝစားရတဲ့ဆိုင်မျိုးဆိုရင်လည်း ကိုယ်စားလိုက်တဲ့ ပန်းကန်အလွတ်တွေကို မြင်သာတဲ့နေရာမှာ ထားပါ။ ဒီနည်းတွေ သုံးပြီး စားသင့်တာထပ် အလွန်အကျွံ ပိုမစားသောက်မိအောင် ထိန်းချုပ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ အကန့်အသတ်လုပ်ပြီး စားသောက်ပါ
အစားအသောက်ကို အလွန်အကျွံ စားသောက်မိစေတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အစားအသောက် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်သိသာတဲ့အချက် မဟုတ်ပေမဲ့ စားတဲ့ အကြိမ်ရေ များလာတာနဲ့ နည်းနည်းချင်းစီ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာစေမှာပါ။ ဥပမာ ပေးရရင် ဘူးအရှည်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ အာလူးကြော်တွေကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အာလူးကြော် တစ်ချပ်ချင်းစီကို စီစီရီရီထည့်ထားပြီး တစ်ချပ်ချင်း နှိုက်စားသွားရုံပဲမို့ သတိမထားမိရင် ခဏလေးနဲ့ တစ်ဘူးလုံး ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင် ပိုသေးတဲ့ ဘူး ၃ ဘူးလောက်မှာ ခွဲထည့်ထားပါ။ ဒီနည်းအားဖြင့် တစ်ဘူး ကုန်သွားနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လောက် စားမိပြီလဲဆိုတာ ပိုသတိပြုမိနိုင်ပြီး အချိန်မှီ ရပ်တန့်ဖို့ ပိုလွယ်ကူသွားမှာပါ။
၃. ရွေးချယ်စရာ သိပ်အများကြီး မထားပါနဲ့
လေ့လာမှုတွေအရ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ရွေးချယ်စားသောက်စရာ အစားအစာတွေ အရမ်းများနေရင် လိုအပ်တာထပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပို စားသောက်မိတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရသာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ စားနေမိရင် လျှာပေါ်က အရသာ ခံစားတဲ့ အာရုံကြောလေးတွေ ထုံသွားပြီး စားချင်စိတ် ကုန်ဆုံးသွားတတ်တဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကြိုက်သလောက်ယူစားလို့ရတဲ့ ဘူဖေးပွဲမျိုးတွေမှာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း စားသောက်ချင်ရင် ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးဟင်း နှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုး လောက်ပဲ ထပ်ခါတလဲလဲစားတာ၊ သောက်စရာဆိုလည်း တစ်မျိုးတည်းပဲ သောက်နေတာမျိုး လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
၄။ အစားအသောက်တွေကို မျက်စိရှေ့ မထားပါနဲ့
ဒီအချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ် မမြင်ရတော့ စိတ်ထဲ မပေါ်လာ၊ မပေါ်လာတော့ စားချင်စိတ် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ အစားအသောက် တစ်ခုပေါ်လာရင် အရင်ဆုံး စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ မေးခွန်းက ငါဒါကိုစားလိုက်ရင် ကောင်းမလားဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မြင်ပါများလေ စားချင်တဲ့စိတ်က ပိုများလေ ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဒီစိတ်ကို လှည့်စားချင်ရင် ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ သစ်သီးဝလံတွေပဲ ထားလိုက်ပါ။ စားမိရင်တောင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅.။ လွယ်လွယ်ကူကူ မစားနိုင်အောင် လုပ်ယူပါ
အစားအသောက် တစ်ခုကို ယူစားဖို့လွယ်ကူလေ ပိုစားဖြစ်လေပါပဲ။ ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲမှာဖြစ်စေ၊ အိပ်ခန်းထဲမှာဖြစ်စေ အာလူးကြော်၊ သကြားလုံး၊ ဝေဖာ လိုလွယ်လွယ်ကူကူ စားလို့ရပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း မညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ဖြစ်နိုင်ရင် မထားပါနဲ့။ လွယ်လွယ်ကူကူ ထယူစားလို့ ရနေသရွေ့စားမိနေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အစားအသောက် မှန်သမျှကို တကူးတက ထသွားယူမှ စားလို့ရမယ့်နေရာမှာပဲ စုထားပါ။
၆။ ဖြည်းဖြည်းချင်း စားပါ
အစားအစာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သေချာကြေညက်အောင် ဝါးစားတဲ့သူတွေက ပိုပြီး ဗိုက်ပြည့်လွယ်တာကြောင့် အစားနည်းသွားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာလို အဓိက အစာစားချိန်ကို မိနစ် ၂၀ ကနေ ၃၀ လောက်ထိ အချိန်ယူပြီး စားသောက်သင့်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီလို အချိန်ပေးပြီး စားတဲ့အခါ ဦးနှောက်က အလွန်အကျွံ စားချင်တဲ့စိတ်ကို လျော့ပါးသွားအောင် လုပ်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ဗိုက်ပြည့်နေစေတဲ့ ခံစားချက် ဖြစ်ပေါ်အောင် ဟော်မုန်းဓာတ်တစ်မျိုး ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။
၇။ စားနေရင်း တီဗီမကြည့်ပါနဲ့
တီဗီမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအသောက် စားနေတုန်း သီချင်းနားထောင်တာ၊ ဂိမ်းဆော့တာ တွေကကိုယ်စားနေတဲ့ အစားအသောက်ပေါ်ကနေ အာရုံပျံ့နှံ့စေပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိဘဲ အလွန်အကျွံ စားသောက်မိတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်က ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းက ကြာလေလေ စားသောက်မိတာများလေလေ ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ဆိုတော့ စားရင်းသောက်ရင်း တီဗီကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် ဘာကြည့်ကြမလဲဆိုတာ အရေးပါလာပါပြီ။
အစားအသောက်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ် ပုံမှန်လည်ပတ် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်စားဖို့ သောက်ဖို့ လိုအပ်တာ မှန်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ တကယ်မဆာဘဲ စားမိသောက်မိနေရင်လည်း စွမ်းအင်တွေ ပိုလျှံပြီး အကျိုးမရှိပါဖြစ်မှာပါ။ စားချိန်သောက်ချိန်ရောက်လို့ စားလိုက်တယ်ဆိုတာထပ် အမှန်တကယ် ဗိုက်ဆာနေလို့၊ စွမ်းအင်လိုအပ်လို့ စားသောက်မိတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါစေ။
၉။ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ရောင်းတဲ့အစားအစာ တချို့ကို ဂရုစိုက်ပါ
အခုခေတ်မှာ စားသောက်စရာ အမျိုးအစားတွေများလွန်းတာရယ်၊ ကြေညာအား ကောင်းလွန်းတာရယ်တွေကြောင့် စားစရာ ရွေးဝယ်ရင် ပိုပြီး မျက်စိလည်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ တချို့ အစားအသောက်တွေမှာ “Low Fat” အဆီပါဝင်မှု နည်းသည် ဆိုပြီး တပ်ထားတိုင်းလည်း သိပ်မယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့။ အဆီပါဝင်မှု နည်းတိုင်း ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အဆီပါဝင်မှု နည်းတယ်ဆိုပြီး စားရင်း ကယ်လိုရီတွေ အများကြီး တက်သွားနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ အစားအသောက် ရွေးပါ
အစားအသောက်တွေ စားလိုက်ရင် ဗိုက်ပြည့်သွားတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စားလိုက်တဲ့ အစားအသောက်ပေါ် မူတည်ပြီး စားလိုက်တိုင်း ဝလာတဲ့သူနဲ့ စားပေမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်မလာတဲ့သူ ဆိုပြီး ကွဲပါသေးတယ်။ ဒီလို ကွဲပြားရတဲ့အဓိက အချက်ကတော့ စားလိုက်တဲ့ အစားအသောက်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အဆီတွေ၊ အကြော်အလှော်တွေ၊ ထမင်းတွေစားလည်း ဗိုက်ပြည့်သလို အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ငှက်ပျောသီးစတာတွေ စားလည်း ဗိုက်ပြည့်တာမို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုသင့်တော်မယ့် အစားအစာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။
တဈရကျတဈရကျ စားဖို့သောကျဖို့အကွောငျးကို အနညျးဆုံးအခါ ၂၀၀ လောကျတှေးမိတယျဆိုတာ သငျ သိပါသလား? ဒါကွောငျ့ ဒီလို စိတျမထိနျးနိုငျဘဲ အလှနျအကြှံ ဆှဲတတျသူတှအေတှကျ အထောကျအကူဖွဈမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ဘယျလောကျစားလိုကျသလဲ အမှတျအသား လုပျထားပါ
အစားအသောကျကို လှနျလှနျကဲကဲ စားသောကျမိစတေဲ့ အခကျြက ကိုယျဘယျလောကျ စားသောကျလိုကျမိသလဲ ဆိုတာ သခြော သတိမပွုမိလို့ ဖွဈတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဒီတော့ ကိုယျ ဘယျလောကျ စားလိုကျသလဲဆိုတာ သိအောငျ အမှတျအသားလုပျထားပါ။ ဘီယာ သောကျရငျလညျး ဘယျနှပုလငျး ကုနျသှားပွီလဲ သိအောငျ ပုလငျးထောငျထားပါ။ ဘူဖေးလို အဝစားရတဲ့ဆိုငျမြိုးဆိုရငျလညျး ကိုယျစားလိုကျတဲ့ ပနျးကနျအလှတျတှကေို မွငျသာတဲ့နရောမှာ ထားပါ။ ဒီနညျးတှေ သုံးပွီး စားသငျ့တာထပျ အလှနျအကြှံ ပိုမစားသောကျမိအောငျ ထိနျးခြုပျတတျသှားပါလိမျ့မယျ။
၂။ အကနျ့အသတျလုပျပွီး စားသောကျပါ
အစားအသောကျကို အလှနျအကြှံ စားသောကျမိစတေဲ့ နောကျတဈခကျြကတော့ အစားအသောကျ ထုပျပိုးမှုပုံစံပဲ ဖွဈပါတယျ။ သိပျသိသာတဲ့အခကျြ မဟုတျပမေဲ့ စားတဲ့ အကွိမျရေ မြားလာတာနဲ့ နညျးနညျးခငျြးစီ ကိုယျအလေးခြိနျ တကျလာစမှောပါ။ ဥပမာ ပေးရရငျ ဘူးအရှညျနဲ့ ထညျ့ထားတဲ့ အာလူးကွျောတှကေို မွငျယောငျကွညျ့ပါ။ အာလူးကွျော တဈခပျြခငျြးစီကို စီစီရီရီထညျ့ထားပွီး တဈခပျြခငျြး နှိုကျစားသှားရုံပဲမို့ သတိမထားမိရငျ ခဏလေးနဲ့ တဈဘူးလုံး ကုနျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဖွဈနိုငျရငျ ပိုသေးတဲ့ ဘူး ၃ ဘူးလောကျမှာ ခှဲထညျ့ထားပါ။ ဒီနညျးအားဖွငျ့ တဈဘူး ကုနျသှားနဲ့ ကိုယျဘယျလောကျ စားမိပွီလဲဆိုတာ ပိုသတိပွုမိနိုငျပွီး အခြိနျမှီ ရပျတနျ့ဖို့ ပိုလှယျကူသှားမှာပါ။
၃. ရှေးခယျြစရာ သိပျအမြားကွီး မထားပါနဲ့
လလေ့ာမှုတှအေရ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ရှေးခယျြစားသောကျစရာ အစားအစာတှေ အရမျးမြားနရေငျ လိုအပျတာထပျ ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ပို စားသောကျမိတတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အရသာတဈမြိုးတညျးကိုပဲ ထပျခါတလဲလဲ စားနမေိရငျ လြှာပျေါက အရသာ ခံစားတဲ့ အာရုံကွောလေးတှေ ထုံသှားပွီး စားခငျြစိတျ ကုနျဆုံးသှားတတျတဲ့သဘော ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကွိုကျသလောကျယူစားလို့ရတဲ့ ဘူဖေးပှဲမြိုးတှမှော ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး စားသောကျခငျြရငျ ကိုယျ့အကွိုကျဆုံးဟငျး နှဈမြိုး၊ သုံးမြိုး လောကျပဲ ထပျခါတလဲလဲစားတာ၊ သောကျစရာဆိုလညျး တဈမြိုးတညျးပဲ သောကျနတောမြိုး လုပျကွညျ့လို့ရပါတယျ။
၄။ အစားအသောကျတှကေို မကျြစိရှေ့ မထားပါနဲ့
ဒီအခကျြကတော့ ရှငျးပါတယျ။ ကိုယျ မမွငျရတော့ စိတျထဲ မပျေါလာ၊ မပျေါလာတော့ စားခငျြစိတျ မဖွဈတော့ဘူးပေါ့။ နောကျပွီး ကိုယျ့မကျြစိရှေ့ အစားအသောကျ တဈခုပျေါလာရငျ အရငျဆုံး စိတျထဲမှာ ပျေါလာတဲ့ မေးခှနျးက ငါဒါကိုစားလိုကျရငျ ကောငျးမလားဆိုတာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မွငျပါမြားလေ စားခငျြတဲ့စိတျက ပိုမြားလေ ဖွဈမှာပါပဲ။ ဒီစိတျကို လှညျ့စားခငျြရငျ ကိုယျ့မကျြစိရှမှေ့ာ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ သဈသီးဝလံတှပေဲ ထားလိုကျပါ။ စားမိရငျတောငျ ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးရှိစမှော ဖွဈပါတယျ။
၅. လှယျလှယျကူကူ မစားနိုငျအောငျ လုပျယူပါ
အစားအသောကျ တဈခုကို ယူစားဖို့လှယျကူလေ ပိုစားဖွဈလပေါပဲ။ ကိုယျ့ရုံးခနျးထဲမှာဖွဈစေ၊ အိပျခနျးထဲမှာဖွဈစေ အာလူးကွျော၊ သကွားလုံး၊ ဝဖော လိုလှယျလှယျကူကူ စားလို့ရပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့လညျး မညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျတှေ ဖွဈနိုငျရငျ မထားပါနဲ့။ လှယျလှယျကူကူ ထယူစားလို့ ရနသေရှစေ့ားမိနမှောပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အစားအသောကျ မှနျသမြှကို တကူးတက ထသှားယူမှ စားလို့ရမယျ့နရောမှာပဲ စုထားပါ။
၆. ဖွညျးဖွညျးခငျြး စားပါ
အစားအစာကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး သခြောကွညေကျအောငျ ဝါးစားတဲ့သူတှကေ ပိုပွီး ဗိုကျပွညျ့လှယျတာကွောငျ့ အစားနညျးသှားတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။ တိတိကကြ ပွောရရငျ မနကျစာ၊ နလေ့ညျစာ၊ ညစာလို အဓိက အစာစားခြိနျကို မိနဈ ၂၀ ကနေ ၃၀ လောကျထိ အခြိနျယူပွီး စားသောကျသငျ့တယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ ဒီလို အခြိနျပေးပွီး စားတဲ့အခါ ဦးနှောကျက အလှနျအကြှံ စားခငျြတဲ့စိတျကို လြော့ပါးသှားအောငျ လုပျပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျကလညျး ဗိုကျပွညျ့နစေတေဲ့ ခံစားခကျြ ဖွဈပျေါအောငျ ဟျောမုနျးဓာတျတဈမြိုး ထုတျလုပျပေးပါတယျ။
၇။ စားနရေငျး တီဗီမကွညျ့ပါနဲ့
တီဗီမှ မဟုတျပါဘူး။ အစားအသောကျ စားနတေုနျး သီခငျြးနားထောငျတာ၊ ဂိမျးဆော့တာ တှကေကိုယျစားနတေဲ့ အစားအသောကျပျေါကနေ အာရုံပြံ့နှံ့စပွေီး ကိုယျကိုယျတိုငျ သတိမထားမိဘဲ အလှနျအကြှံ စားသောကျမိတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ နောကျထပျ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့တဈခကျြက ကိုယျကွညျ့နတေဲ့ ရုပျသံ ဇာတျလမျးက ကွာလလေေ စားသောကျမိတာမြားလလေေ ဆိုတဲ့အခကျြပါ။ ဆိုတော့ စားရငျးသောကျရငျး တီဗီကွညျ့မယျဆိုရငျတောငျ ဘာကွညျ့ကွမလဲဆိုတာ အရေးပါလာပါပွီ။
အစားအသောကျဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျ ပုံမှနျလညျပတျ အလုပျလုပျနိုငျဖို့ စှမျးအငျအရငျးအမွဈတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နစေ့ဉျစားဖို့ သောကျဖို့ လိုအပျတာ မှနျပါတယျ။ သို့ပမေဲ့ တကယျမဆာဘဲ စားမိသောကျမိနရေငျလညျး စှမျးအငျတှေ ပိုလြှံပွီး အကြိုးမရှိပါဖွဈမှာပါ။ စားခြိနျသောကျခြိနျရောကျလို့ စားလိုကျတယျဆိုတာထပျ အမှနျတကယျ ဗိုကျဆာနလေို့၊ စှမျးအငျလိုအပျလို့ စားသောကျမိတာမြိုးပဲ ဖွဈပါစေ။
၉။ ကနျြးမာရေးအတှကျဆိုပွီး ခေါငျးစဉျတပျရောငျးတဲ့အစားအစာ တခြို့ကို ဂရုစိုကျပါ
အခုခတျေမှာ စားသောကျစရာ အမြိုးအစားတှမြေားလှနျးတာရယျ၊ ကွညောအား ကောငျးလှနျးတာရယျတှကွေောငျ့ စားစရာ ရှေးဝယျရငျ ပိုပွီး မကျြစိလညျစရာ ဖွဈလာပါတယျ။ တခြို့ အစားအသောကျတှမှော “Low Fat” အဆီပါဝငျမှု နညျးသညျ ဆိုပွီး တပျထားတိုငျးလညျး သိပျမယုံကွညျလိုကျပါနဲ့။ အဆီပါဝငျမှု နညျးတိုငျး ကယျလိုရီပါဝငျမှုနညျးတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အဆီပါဝငျမှု နညျးတယျဆိုပွီး စားရငျး ကယျလိုရီတှေ အမြားကွီး တကျသှားနိုငျပါတယျ။
၁၀။ အစားအသောကျ ရှေးပါ
အစားအသောကျတှေ စားလိုကျရငျ ဗိုကျပွညျ့သှားတာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စားလိုကျတဲ့ အစားအသောကျပျေါ မူတညျပွီး စားလိုကျတိုငျး ဝလာတဲ့သူနဲ့ စားပမေဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ တကျမလာတဲ့သူ ဆိုပွီး ကှဲပါသေးတယျ။ ဒီလို ကှဲပွားရတဲ့အဓိက အခကျြကတော့ စားလိုကျတဲ့ အစားအသောကျပျေါ မူတညျပါတယျ။ အဆီတှေ၊ အကွျောအလှျောတှေ၊ ထမငျးတှစေားလညျး ဗိုကျပွညျ့သလို အမြှငျဓာတျကွှယျဝတဲ့ အသီးအနှံတှေ၊ ကနျစှနျးဥ၊ ငှကျပြောသီးစတာတှေ စားလညျး ဗိုကျပွညျ့တာမို့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုသငျ့တျောမယျ့ အစားအစာတှကေိုပဲ ရှေးခယျြစားသုံးသငျ့ပါတယျ။